Ngosuku olulandelayo, ngavele ngaba nemfiva ephezulu kakhulu ngokungalindelekile, futhi wonke amalungu omzimba wami ayensonsotha. Ekuqaleni ngacabanga ukuthi ngingenwe umkhuhlane ngilele ebusuku kanye nokuthi ngingaba ngcono uma ngingaphuza umuthi. Kodwa ubani owayazi ukuthi ukuphuza umuthi kwakungeke kusize, nokuthi ezinsukwini ezimbili ezizayo ngangizobe sengingakwazi nokwehla embhedeni. Phezu kwalokho, ulimu lwami lwavuvukala futhi lwaqina, nomphimbo wami wavuvukala ngubuhlungu, okwakubuhlungu kangangokuthi ngangingasakwazi nokukhuluma. Ukugwinya amathe kodwa nje kwakunzima, angisakhulumi ngokudla-ke. Ngithe uma ngiqalwa yilokhu kugula, ngezwa nginokwesaba, futhi ngaqhubeka nokukhuleka kuNkulunkulu enhliziyweni yami. Ngaleso sikhathi, kwangicacela bha enhliziyweni yami: Ubani okuvumele ukuqamba amanga? Uma uqamba amanga kufanele ujeziswe. Ngale ndlela, ulimu lwakho ngeke lusona. Yilapho-ke okwangicacela khona ukuthi ukujezisa kukaNkulunkulu kwase kuphezu kwami. Ngaphangisa ngaxolisa kuNkulunkulu ngenhliziyo yami: “O Nkulunkulu, ngiyazi bengisephutheni. Ngicela ungixolele. Kulesi sikhathi nakanjani ngizovuleleka.” Emva kokuthandaza, ngaqaphela ukuthi ubuhlungu emphinjeni wami baba ngcono kakhulu. Noma kunjalo, uma umlingani wami nodade womndeni osisingethe befika bezongibuza ukuthi ngiguliswa yini isigubhukane kanje, ekuqaleni ngangifuna ukubatshela iqiniso lonke, kodwa ngabuye ngacabanga: “Uma ngivuleleka, ngidalule zonke izinto engangizishilo ngaphambilini zizoshayisana. Ingabe babezothi nginamaqhinga ngokwedlulele? Sasizohlalisana kanjani emva kwalokho?” Emva kokucabanga ngalezi zinto, nalapho ngangingenaso isibindi sokudalula iqiniso, ngavele ngathi ngokunganaki nje ngigule ngoba bengikhumbula ekhaya. Sebehambile, ngangakhululeki enhliziyweni yami kwaba sengathi kunommese ongisikayo. Ngangingakaze ngicabange ukuthi ukukhohlisa kwakungangifikela kalula kangaka ngaphandle kokuthanda kwami. Ngalala embhedeni, ngizwa nginokucinana esifubeni sami kanye nokungakwazi ukuphefumula kahle, kwangathi sengizofa. Ngangesaba ukuthi ngizophelelwa umoya, ngakho phezu kwakho konke lokhu ngazihudula ngayovula isicabha sasegumbini ukuze kungene umoya. Ubani owayazi ukuthi ngizothi ngifika esicabheni, ngizwe inzululwane. Kwavele kwamnyama phambi kwamehlo ami ngenkathi imilenze yami iphelelwa amandla wase umzimba wami wonke waqubuka umjuluko. Ngokufutheka okukhulu, ngancika obondeni lwesicabha, umugqa wamazwi kaNkulunkulu adlula enhliziyweni yami: “Ngingavumela kanjani abantu bangiphange ngaleyo ndlela?” (“Nonke Nibabi Kakhulu Ngokwesimilo!” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ebusweni bamazwi obukhosi nolaka lukaNkulunkulu, ngezwa ulaka lukaNkulunkulu lubhekiswe kimina, inhliziyo yami yavele yathuthumela ukwesaba. Isimo sikaNkulunkulu siphathwe ngendluzula, kodwa ngenxa yesikhundla sami emphakathini, izinga engikulona, kanye nokuziqhenya nokuzazisa, ngakhohlisa isikhathi sesifungo sami kulandelana, ngakhohlisa uNkulunkulu ngokungahlonizi. UNkulunkulu wayengangivumela kanjani ukuba ngimphathe kanje? Ngahefuzelela phezulu ngilokhu ngithi kuNkulunkulu enhliziyweni yami: “Kulokhu nakanjani ngizovuleleka …” Ngaphansi kwesiyalo nokujeziswa nguNkulunkulu, ekugcineni ngangingasenako okunye engingakwenza ngaphandle kokuba ngidalule udaba lonke kodade.